IHalloween e-Italy | Ukuhamba kwe-Absolut
Isabella | 16/04/2021 11:05 | Kubuyekezwe ku- 16/04/2021 12:05 | Italia
Izinsuku ezimbili ezibaluleke kakhulu ezikhonjiswe ekhalendeni lase-Italy yi-All Saints 'Day (eyaziwa nangokuthi iTutti i Santi) egujwa ngoNovemba 1 kanye nosuku lwabafileyo (Il Giorno dei Morti), olwenzeka ngoNovemba 2. Le yimikhosi emibili yenkolo neyomndeni lapho amalungu ayo ehlangana khona ukukhumbula labo abangasekho nokuhlonipha labo abangcweliswe nguNkulunkulu.
Yomibili le mikhosi igujwa emazweni anamasiko obuKrestu kodwa ngezindlela ezahlukene. Emazweni angama-Anglo-Saxon iHalloween igujwa ngenkathi emazweni amagugu amaKhatholika igujwa ngoSuku Lwabo Bonke Osanta nangoSuku Lwayo Yonke Imiphefumulo. Eposini elilandelayo sizongena kulo mbuzo nokuthi iHalloween igujwa kanjani e-Italy.
1 Lugujwa kanjani usuku lwe-All Saints e-Italy?
2 Lugujwa kanjani uSuku Lwemiphefumulo Yonke e-Italy?
3 Futhi kwezinye izifunda zase-Italy?
4 Iyini i-Halloween?
4.1 Igujwa kanjani i-Halloween namuhla?
4.2 Uyabazi ubuqili noma ukwelashwa kwe-Halloween?
5 Futhi igujwa kanjani iHalloween e-Italy?
Lugujwa kanjani usuku lwe-All Saints e-Italy?
Usuku lukaTutti i Santi luyiholide elihlukile kunosuku luka-Il Giorno dei Morti. UNovemba 1 ukhunjulwa ngendlela ekhethekile kubo bonke labo ababusisiwe noma abangcwele abaphila ngokukholwa kwabo ngendlela ekhethekile noma abafela yona futhi, abathi sebedlulile esihlanzweni, bangcweliswa futhi sebevele bahlala embusweni wezulu ebukhoneni bukaNkulunkulu .
Kujwayelekile e-Italy nakwamanye amazwe ngesiko lamaKhatholika ukugubha lolu suku ngokukhombisa izinsalela zabangcwele emasontweni amakhulu nasemasontweni amakhulu.
Lugujwa kanjani uSuku Lwemiphefumulo Yonke e-Italy?
Kuliholidi likazwelonke. Ekuseni ngalolo suku kugujwa i-requiem yomuntu oshonile emasontweni nakulo lonke usuku, amaNtaliyane aya emathuneni ukuletha izimbali ngazo bahlonipha izihlobo zabo ezingasekho, ikakhulukazi ama-chrysanthemums, futhi babheke amathuna abo ababathandayo. Lolu suku lwenzeka ngoNovemba 2 kanti inhloso yalo ukukhulekela labo abashonile ukuba bakhumbule inkumbulo yabo futhi bacele uNkulunkulu ukuba abamukele ngasohlangothini lwakhe.
Ngakolunye uhlangothi, AmaNtaliyane avame ukupheka ikhekhe lendabuko elinjengebhontshisi elaziwa nge- "ossa dei morti" yize kubuye kubizwe nangokuthi "ikhekhe labafileyo." Uhlala ekhona emibuthanweni yomndeni ngalezi zinsuku ngoba kunenkolelo yokuthi umufi ubuya ngalolo suku ezohlanganyela edilini.
Imindeni yendabuko eyengeziwe ilungisa itafula bese iya esontweni ukuyothandazela labo abangasekho. Iminyango ishiywe ivulekile ukuze imiphefumulo ingene endlini kungabi bikho othinta ukudla kuze kubuye umndeni esontweni.
Futhi kwezinye izifunda zase-Italy?
Sicilia: Ngobusuku be-All Saints kule ndawo kukholakala ukuthi umufi womndeni ufuna ukushiya izipho zabancane kanye nezithelo zeMartorana namanye amaswidi.
UMassa Carrara: Kulesi sifundazwe, kunikezwa abaswele ukudla bese benikwa ingilazi yewayini. Izingane zivame ukwenza umgexo owenziwe ngama-chestnut abilisiwe nama-apula.
IMonte Argentina: Kule ndawo isiko bekungukufaka izicathulo emathuneni kamufi ngoba bekucatshangwa ukuthi ngobusuku bangoNovemba 2 umphefumulo wabo uzobuyela emhlabeni wabaphilayo.
Emiphakathini yaseningizimu ye-Italy inkokhiso ikhokhwa koshonile ngokwesiko laseMpumalanga lomkhuba waseGrisi-waseByzantium futhi imikhosi yenzeka emasontweni angaphambi kokuqala kweLente.
Njengoba ngishilo emigqeni edlule, I-Halloween igujwa emazweni esiko lama-Anglo-Saxon. Lo mgubho ususelwa emkhosini wasendulo wamaCelt obizwa ngeSamhain, owawenzeka ekupheleni kwehlobo lapho isikhathi sokuvuna siphela futhi unyaka omusha waqala ukuqondana nesikhathi sasebusika.
Ngaleso sikhathi Kwakukholelwa ukuthi imimoya yabafileyo yayihamba phakathi kwabaphilayo ngobusuku be-Halloween, Okthoba 31. Ngalesi sizathu bekungumkhuba ukwenza amasiko athile ukuxhumana nomufi nokukhanyisa ikhandlela ukuze bathole indlela eya komunye umhlaba.
Namuhla, iphathi ye-Halloween yehluke kakhulu kuneyokuqala. Impela uke wakubona kaningi kumabhayisikobho! Manje incazelo engaphezu kwemvelo ye-Halloween ibekelwe eceleni anikeze ithuba lokugubha uhlobo lokudlala, lapho inhloso enkulu ukuzijabulisa phakathi kwabangane.
Igujwa kanjani i-Halloween namuhla?
Iningi labantu ligqokela amaphathi asendlini noma liphuma nabangani kuma-nightclub ukuyozijabulisa emicimbini enetimu. Ngalo mqondo, imigoqo, izindawo zokudlela ezinhle, amadisco nezinye izinhlobo zezitolo zilwela ukuhlobisa zonke izikhungo ngengqikithi ejwayelekile yephathi.
Uphawu lokuhlobisa lwaleli siko nguJack-O'-Lantern, ithanga eliqoshwe ebusweni balo bangaphandle nobuso obumnyama futhi ingaphakathi lalo lithululelwe ukubeka ikhandlela ngaphakathi bese likhanyisa. Umphumela uba isipoki! Kodwa-ke, amanye ama-motifs wokuhlobisa nawo asetshenziswa njengama-cobwebs, amathambo, amalulwane, abathakathi, njll.
Uyabazi ubuqili noma ukwelashwa kwe-Halloween?
Izingane nazo ziyayijabulela ngempela iHalloween. Njengabantu abadala, Bagqoka bavakashele izindlu ezisendaweni yabo njengeqembu becela omakhelwane babo ukuthi babanikeze amaswidi ngokusebenzisa "iqhinga noma ukwelashwa" okudumile. Kepha iqukethe ini?
Kulula kakhulu! Lapho bengqongqoza emnyango kamakhelwane wakho nge-Halloween, izingane ziphakamisa ukwamukela iqhinga noma ukwenza isivumelwano. Uma ekhetha ukwelashwa, izingane zithola uswidi kodwa uma umakhelwane ekhetha ukwelashwa, khona-ke izingane zenza ihlaya elincane noma i-prank ngokungabaniki amaswidi.
Futhi igujwa kanjani iHalloween e-Italy?
Yize kungumkhosi odabuka e-Anglo-Saxon, ususabalale kakhulu e-Italy futhi ugujwa ikakhulukazi ngabantu abadala, hhayi kakhulu izingane, ngakho-ke kuhluke kakhulu ukubabona benza "ubuqili noma ukwelapha" endlini.
Iningi lama-Italiya ligqoka ngokuya emaphathini emakilabhini noma ezindlini ukuze lijabulele isikhathi esimnandi enkampanini yabangane, ukuphuza iziphuzo ezimbalwa nokudansa kuze kuse.
E-Italy izitolo nazo zihlotshiswe ngemidwebo ejwayelekile yokuhlobisa ye-Halloween njengamathanga, izilo, ubulembu, amalulwane, abathakathi noma izipoki, phakathi kwabanye.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » IHalloween e-Italy